विचार/दृष्टिकोण | नेपाली जनता :: Nepali Janta: | Page 7
स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदै सरकार
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना पूरा भएको छ । ओली सरकारको ६ महिने कार्यकाल काममा भन्दा हल्लामै सिमित रहेको छ । निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कागजमै सिमित भएका छन् भने जनताले उपयोग गर्दै आएका…
कुस्ती खेल्ने लिखुरे राष्ट्रपतिको कुर्सीमा
सन् १८३० मा अब्राहम लिंकन २१ वर्षका थिए । ६ फुट ४ इञ्च अग्ला, दुब्ला तर तन्दुरुस्त शरीर । दिनभरि खेतमा काम गरिरहने भएकाले शारीरिक रुपमा बलियो । कोदालो, हलो, बञ्चरो सबै चलाउने । अत्यन्त परिश्रमी ।…
साउन १० गतेसम्म डा. गोबिन्द केसी नेपाली बजारमा बहसको बिषय थियो । राती १० बजे सरकार र केसीका प्रतिनिधिका बिचमा ९ वटा बुँदामा सहमति भयो र डा. केसीको पन्ध्रौ पटकको २७औ दिनको आमरण अन्सन स्थगित भयो । सहमतिको…
जोशीले तर्लान् त विवादको कोशी ?
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने–नबन्ने चुनौतिको कसीमा छन् । प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएको जोशीबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छानबिन भइरहेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएपछि समितिले सुनुवाई लम्ब्याउँदा जोशी अरु संकटमा परेका…
अनुत्तरदायी पत्रकारितामार्फत् झुठ र भ्रमको खेत
सुधीर शर्मा सम्पादक भएका बखत कान्तिपुर पत्रिकामा मलाई एसएलसी फेल भनेर लेखियो । त्यसका रचनाकारमा पत्रकार कृष्ण ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो र खोज पत्रकारिता केन्द्रका शिव गाउँलेको हवाला दिइएको थियो । त्यो खोज पत्रकारिता केन्द्रको आर्थिक स्रोत विदेशी…
संघीय संसद, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका बेला जनतालाई झुठको आश्वासन देखाएर सत्तामा पुगेका केपी ओली अहिले आफ्नो र आफ्ना सहयोगीहरुकै कारण हास्यास्पद बन्दै गएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दा…
सुन्दरीले फुत्काएको त्यति शानदार सूचना
एमी एलिजाबेथ थोर्पेको जन्म अमेरिकाको मिनेसोटामा भयो । बाबु जर्ज जलसैनिक, आमा कोरा वेल्स सांसद पुत्री । सानैमा कूटनीतिज्ञहरुको सम्पर्कमा पुगिन् । उमेरमा धेरै जेठा पुरुष कूटनीतिज्ञहरुसँग रोमान्स गर्न थालिन् । यसै सेरोफेरोमा वासिंगटनस्थित बेलायती…
संसदमा उनीहरू कसलाई थर्काउँछन् ?
काठमाडौं । सामान्यतया संसदमा विपक्षीले आफ्ना कुराहरु जोडदार ढंगले उठाउने गर्छन् । भनिन्छ सरकार सत्तापक्षको सदन र सडक प्रतिपक्षको हो । तर संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकार र आफ्नो पार्टीलाई बेलामौका धम्क्याउने गरेका छन् ।
जिल्लाबाट निर्वाचित भएर संसदमा आएर के–के…
न्यायको माग गर्दै ज्यान गुमाउनुपर्ने, वा लोकतन्त्र !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई सुशासन दिने आश्वासन पटक पटक दिएपनि सुशासनको कार्यमा उनी असफल सावित हुँदै गएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु नै विधिको शासन भत्काउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलालाई अपमान गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।…
नेतालाई मस्ती जनतालाई सास्ती, यही हो उपलब्धी !
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको ठुला ठुला डंक पिटेपनि अन्तिम समयमा आएर सरकार पछि हटेको छ । यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन पछिल्लो समयमा प्राय सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागु भएको छ । सिन्डिकेट…
डियर कमरेड से नो टु एमसीसी 44 views
उपमेयर अमेरीका भाँसिएपछि खैलाबैला, विदेश भासिने सिलसिला यस्तो 12 views